Kachasị mma UV-Plasma Akpaaka Mmepụta Igwe Nrụpụta na Factory | Judphone
Igwe na-efe efe nke UV-Plasma akpaaka
● Mgbasa ọrịa ngwa ngwa, 30 n'ime Nkeji 12
●Ikuku, elu na ala disinfection 99.9999%
●UVC-LED gburugburu disinfection nke ala na wiil
● Plasma disinfection modul, nweta bacteriostasis na otutu nchebe
●Nwapụta oriọna amalgam dị elu, ike ọkụ kachasị 4000μW/cm2 na 1m
●Nchịkwa akpaaka zuru oke & ọgụgụ isi
Disinfection ARapid. Ngwọta imecha nke ime ụlọ 30 nf na nkeji 8. Ike bactericidal ruru 99.99%O
AFreely retractable. Mgbe igwe disinfection adịghị arụ ọrụ disinfection ma ọ bụ mezue ọrụ ahụ, igwe ahụ ga-eme ka usoro nchebe ahụ gbanwee, nke mere na oriọna niile nwere ike ịtụgharị n'ime ahụ robot iji chebe oriọna ultraviolet.
Aultra-silent Mgbe disinfector na-aga na-akpaghị aka, decibel na-arụ ọrụ na-erughị 35dB. Mgbe disinfector na-ekpochapụ na-akpaghị aka, decibel na-arụ ọrụ na-erughị 50dB.
Ejiri ya na ihe mmetụta nchọpụta ndụ 5, igwe disinfection UV, na usoro nke disinfection, nwere ike ịmata ndị mmadụ ma ọ bụ anụmanụ n'ime disinfection nso, wee kwụsịtụ disinfection ozugbo, ma gbanyụọ oriọna ultraviolet, iji gbochie mmerụ ahụ ndị mmadụ ma ọ bụ anụmanụ.
Asafety design.E nwere bọtịnụ nkwụsị mberede (EMO) ma n'elu na chassis, nke a pụrụ iji wepụ ike ọrụ na ọnọdụ mberede ọ bụla. Enwere mgba ọkụ ọkụ ultraviolet n'okpuru ihuenyo mmetụ dị n'elu. Mgbe ịpịrị ya, enwere ike ịpụpụ oriọna ultraviolet maka nrụzi na ịrụ ọrụ dị mma.
Asuper ntachi obi, ọ nwere ike ghọta disinfection ụlọ nke ihe dị ka 350 m2 maka otu ụgwọ. Ụzọ chajị abụọ: akpaka na nchaji ntuziaka. Na-edozi nchegbu nke ntachi obi igwe.
AMulti-disinfection.There nwere 8 elu-ike UVC-LED disinfection oriọna na ala nke disinfection igwe, nke nwere ike na-aghọta multi-disinfection na ala na wiil nke igwe. Ejiri modul disinfection plasma, ọ nwere ike nweta bacteriostasis na-aga n'ihu na ọtụtụ nchebe n'okpuru ịdị n'otu nke mmadụ na igwe.
Alntelligent contro Pad Control, Ọ nwere ike ịrụ njikwa ikike, arụ ọrụ robot, ndekọ ndekọ ndekọ data disinfection, mkpesa na arụmọrụ ndị ọzọ.
A na-ejikarị ngwaahịa disinfection UVC ultraviolet eme ihe maka ikuku ikuku ( nje, nje bacteria, ma ọ bụ fungi nwere ike gbasaa na ikuku site na iku ume, ikwu okwu, ụkwara, imi, uzuzu, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-emepụta ihe na-emepụta aerosol siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri. usoro oyi ga-eduga n'ihu mgbasa nke nje bacteria na ikuku, na-eje ozi dị ka isi disinfection ebe), elu disinfection (Saliva na ụmụ irighiri mmiri na-emepụta mgbe ndị mmadụ ụkwara ma ọ bụ na-ekupụ ume, ọtụtụ n'ime ha dara n'elu dị nso na elu na ihe, dị ka tebụl ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ha bu nje virus, ndị ọrụ nwere ike bute ọrịa site na imetụ elu ma ọ bụ ihe emetọru aka wee metụ anya, ntị, ọnụ na imi), na nsị ihe (Nje virus nwere ike ịdị ndụ n'elu ihe ruo ụbọchị ise, ya mere ihe ize ndụ nke ọrịa na-arị elu karịa mgbe a na-akpọtụrụ ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị ma ọ bụ ngwa ndị a na-ekekọrịta. Ngwọta mgbe niile nke akụkọ kwa ụbọchị na nke a na-ejikarị eme ihe nwere ike inye aka mee ka nje virus na nje bacteria ghara ịrụ ọrụ n'elu ihe ahụ). WHO na-akọ na ọ dịghị microbes na UV-C ultraviolet na-eguzogide ka a hụrụ ugbu a. Dabere na elu-ike UV-C ultraviolet na kwụụrụ onwe mobile robot, yana ijikọta na plasma technology, a ngwa ngwa UV-Plasma disinfection robot (AUVP1) ga- a ga-eke. Akwụkwọ a na-ewebata teknụzụ R&D chọrọ nke robot disinfection maka mmalite nke ọrụ a.
1.207W x 10 cps UV-C oriọna
2.High-intensity amalgam oriọna oriọna, na mkpuchi sara mbara nke ike dị irè.
3.The kacha ọkụ ọkụ ike nke 4000 μW / cm2 na 1m.
4.Completing disinfection nke a 30㎡ ụlọ na 12 nkeji.
5.The disinfection mmetụta bụ gbaara site a-atọ ndị ọzọ ule alụmdi.
6.Freely retractable oriọna nchebe imewe na adaba oriọna disassembly.
7.Mgbe igwe disinfection adịghị arụ ọrụ nkwụsị ma ọ bụ mezue ọrụ ahụ, igwe ahụ ga-eme ka usoro nchebe ahụ gbanwee, nke mere na oriọna niile nwere ike ịtụgharị n'ime ahụ robot iji chebe oriọna ultraviolet.
8.Autonomous mobile chassis, ultra-silent, ultra-powerful, na ultra-secure.
9.The chassis nke disinfection igwe nwere ike na-aghọta kwụụrụ navigation na mgbochi izere, mgbanwe na-eje ije n'ime ụlọ na-disinfected.
10.Mgbe disinfector na-agagharị na-akpaghị aka, decibel na-arụ ọrụ na-erughị 35dB. Mgbe disinfector na-ekpochapụ na-akpaghị aka, decibel na-arụ ọrụ na-erughị 50dB.
11.Multi-sensọ maka nchekwa nchekwa.
12.A obere nzọụkwụ kwupụta smart disinfection.
13.Ultrasonic modul sensọ, ihe mmetụta igwefoto omimi, radar laser, na ihe mmetụta kọntaktị ihu nchekwa.
14.Live ihe mmetụta, na-elekwasị anya na nchekwa nke usoro disinfection n'oge ọ bụla.
15.Equipped na 5 ndụ nchọpụta sensọ, UV disinfection igwe, na usoro nke disinfection, nwere ike ịmata ndị mmadụ ma ọ bụ anụmanụ n'ime disinfection nso, mgbe ahụ ozugbo kwụsịtụ disinfection, na gbanyụọ ultraviolet oriọna, iji gbochie imerụ ndị mmadụ ma ọ bụ anụmanụ.
16.Safe na n'ebe nile imewe.
17.E nwere bọtịnụ nkwụsị mberede (EMO) ma n'elu na chassis, nke a pụrụ iji wepụ ike ọrụ na ọnọdụ mberede ọ bụla.
18.There bụ ultraviolet oriọna ike mgba ọkụ n'okpuru ihuenyo mmetụ n'elu. Mgbe ịpịrị ya, enwere ike ịpụpụ oriọna ultraviolet maka nrụzi na ịrụ ọrụ dị mma.
19.With surging ike na ibu ntachi obi, na-aga n'ihu disinfection maka 2 awa nwere ike ghọtara maka otu ụgwọ.
20.Equipped na 48V90AH ibu-ike lithium batrị, ọ pụrụ ịghọta ụlọ disinfection nke banyere 350㎡ maka otu ụgwọ. Izute otu mkpa disinfection nke ọtụtụ ndị ahịa.
21.Ụdị nchaji abụọ: chaja akpaka na akwụkwọ ntuziaka. Na-edozi nchegbu nke ntachi obi igwe.
22.Multi-disinfection, na nchekwa gburugburu.
23.There nwere 8 ọkụ ọkụ UVC-LED disinfection oriọna na ala nke disinfection igwe, nke nwere ike na-aghọta multi-disinfection na ala na wiil nke igwe.
24.Equipped na modul disinfection plasma, ọ nwere ike nweta bacteriostasis na-aga n'ihu na ọtụtụ nchebe n'okpuru mmekọrịta mmadụ na igwe.
25.Intelligent njikwa, ga-ka-ịbiko.
26.8-inch Pad akara, yana imewe APP zuru oke. Ọ nwere ike ịrụ njikwa ikike, ịrụ ọrụ robot, ndekọ ndekọ ndekọ data disinfection, mmepụta akụkọ na arụmọrụ ndị ọzọ.
Ultraviolet band Ịgba ọgwụ mgbochi ultraviolet na ogologo ogologo nke 254nm nwere ike bepụ DNA ma ọ bụ RNA nke ụmụ nje, ma gbochie ịmaliteghachi ha, iji nweta disinfection na sterilization.
Mgbasa chassis Enwere otutu oriọna disinfection UVC-LED dị elu na ala nke igwe disinfection, nke nwere ike ịghọta multi-disinfection na ala na wiil nke igwe.
Ikike igba ogwu Ngwọta ikuku 99.9999%, nhichapụ elu 99.9999%, na nsị ala 99.9999%.
Usoro disinfection oriọna sterilization 10 dị elu. Disinfection ya na-akpaghị aka nwere ike nweta 360 ° mkpuchi zuru oke na-enweghị onyinyo, na-eme ka disinfection dị elu na gburugburu ebe obibi.
Ọsọ disinfection Site n'iji disinfection dị elu na ngwa ngwa, ọ nwere ike mechaa disinfection nke ụlọ 30㎡ n'ime nkeji iri na abụọ.
Ọkụnye batrị lithium, yana mkpochapụ na-aga n'ihu maka awa 2 nke otu ụgwọ.
Nchaji akwụkwọ ntuziaka/ akpaaka
metụtara nchekwa Ozugbo achọpụtara ihe ndị dị ndụ n'ime ebe a na-efe efe, a ga-akwụsị nsị.
Robot nwere ihe mmetụta, gụnyere ultrasonic modul sensọ, ihe mmetụta igwefoto omimi, radar laser, na ihe mmetụta kọntaktị ihu nchekwa.
Ọtụtụ mgba ọkụ nchekwa
Enwere ike ịchekwa oriọna na-akpaghị aka iji gbochie mmetụta mpụga.
Mgbanwe njikwa oriọna ọtụtụ ọkwa
Ọrụ Njikwa mpe mpe akwa
Ụlọ ọgwụ: ụlọ ịwa ahụ, ụlọ ndụmọdụ, ngalaba nrụgide na-adịghị mma, ụlọ na-agbanwe ọgwụ, wdg.
Nke gara aga: Robot disinfection, AD10 Ọ DỊGHỊ onye fesa Robot disinfection na chaja nkeonwe maka ụzọ ụgbọ oloko ahịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụlọ akwụkwọ ụlọ ọgwụ.
Osote: Ihe nzacha carbon arụnyere n'ụgbụgbọ mmanụ aṅụ ahaziri
Robot disinfection akpaaka
Sistemụ mkpochapụ akpaaka
Igwe na-efe efe
Sistemụ Ngwọta Uv Maka ụlọ ọgwụ
Igwe na-efe efe Uv-Plasma akpaaka
AD10 Akọrọ Fog Hydrogen Peroxide ọgụgụ isi Disi ...
Ngwọta ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na plasma dị ala ...
AD10S Akọrọ Fog Hydrogen Peroxide-Plasma Intellig...
Robot disinfection, AD10 Ọ DỊGHỊ onye na-efesa ọgwụ…
AM1 obere atomizing sterilize paramita